कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकामा को को छन् आकांक्षी उम्मेदवार ? - Everest Dainik - News from Nepal
कैलालीको लम्की चुहा नगरपालिकामा को को छन् आकांक्षी उम्मेदवार ?
कैलाली, चैत २८ । कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिकामा स्थानीय तहको चुनावीको चहल पहल बढेको छ । सरकारले तोकेको निर्वाचन मिति नजिकिंदै गएपछि चुनावी चहलहल बढेको हो ।
नगरभरी चुनावको चर्चा चलेको नगरवासीले बताएका छन् । दलका नेताहरुको दौडधुप पनि बढेको छ । झण्डै १८ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति वैशाख ३१ गते सरकारले तय गरेको छ । चुनाव नजिकिंदै गर्दा दलका नेता तथा कार्यकर्ताले सङ्गठन विस्तार, वडा भेला लगायतका कार्यमा केन्द्रित भएका छन् ।
त्यस्तै, नगर प्रमुखको उम्मेदवारीमा आकांक्षी देखिएकाहरु पनि टिकटका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । लम्की–चुहा नगरपालिकामा प्रायः सबै पार्टीबाट पाका पुराना नेता सहित केहि युवा नेता मेयर पदमा उम्मेदवारीका लागि आकांक्षी देखिएका छन् ।
देबानन्द जैशी, क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति भक्तबहादुर थापा, खडानन्द सापकोटा सहित चार जना मेयर पदमा उम्मेदवारीका लागि आकांक्षी देखिएका छन् ।
कमला ओली, महादेव बजगाई, कर्ण जैशी, सूर्यबहादुर थापा र नेत्र खनाल गरी पाँच जनाको चर्चा चलेको छ । खनाल बाहेक एमालेका बाँकी सबै पुराना नेता हुन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रंगनाथ ढकाल सहित चार जना मेयर पदमा उम्मेदवारका लागि आकांक्षी देखिएका छन् । राप्रपा नेपालबाट प्रमोदसिंह राठौर, शोभासिंह राठौर, अविलाल चौलागाई र मारकन्दे चौधरी आकांक्षी छन् । सबै पार्टीमा एक भन्दा बढी नेता नगर प्रमुखमा उम्मेदवारको आकांक्षी देखिएपछि मिलाउनका लागि नेता कार्यकर्ता सक्रिय देखिएका छन् । त्यस्तै, आकांक्षी नेताहरु पनि आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन तथा टिकट हात पार्नका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । साविकको बलिया, प्रतापपुर र चुहा नगरपालिका मिलेर बनेको लम्की–चुहा नगरपालिकामा ६० हजार भन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ । सो नगरपालिकामा अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा प्रमुख तीन ठूला राजनीतिक दलबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने नगरवासीले बताएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने सो क्षेत्रमा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीका भगत बडुवाल मुक्ती र दोस्रो निर्वाचनमा नेकपा एमालेका मोहनसिंह राठौरले जित हात पार्नु भएको थियो ।